Shidaalka Soomaaliya | JAMHURIYADDA
Home Dacwada Badda & Shidaalka Shidaalka Soomaaliya
1980yadii, ayaa dawladii Siyaad Barre ay markii ugu horeyay bixisay ruqsad sahminta khayraadka Badda Hindiya (Xaqiiq Aan La Dafiri Karin). Waxaa la tuhunsan yahay in taas ay dhalisay ismaandhaaf dhex maray Soomaaliya iyo shirkadihii hore u heestay ruqsada dhulka.
Khayraadku wuxuu wax ku ool yahay, haddii aan “la kirayn,” lana raaco habka “Norwegian model,” si layskaga ilaaliyo hogga (bohosha) ay ku dheceen dalal badan. Isla markaas la maalgeliyo hormarka bushada (tacliin iyo caafimaad tayo leh), lana casriyeyo teknoloojiyad.
Previous articleWadaaddihii Shalay iyo Kuwa Maanta
Next articleCafiif: Boqorka Caawi Yaha